ဩဂုတျ 2019 » Page2of 11 » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
Month: ဩဂုတျ ၂၀၁၉
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၈ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် ရာသီဥတုအား အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊ အရိပ် အာဝါသရရှိစေရန်၊ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးတို့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ်မိုးရာသီတစ်အုပ်တစ်မ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ယနေ့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများ၏
ဩဂုတျ ၂၆၊ ၂၀၁၉
NAY PYI TAW August 25 Any religion mentions enjoying good benefit only from donations. About six percent of population in Myanmar is Christians and
ဩဂုတျ ၂၅၊ ၂၀၁၉ မေ ၂၈၊ ၂၀၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တပျမတျော(ကွညျး၊ ရေ၊ လေ) မိသားစု မြားနှငျ့ စတေနာရှငျပွညျသူမြားက ဆှမျးဆနျတျော၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ဆေးနှငျ့ ဆှမျးပဒသောပငျ အလှူငှမြေား လှူဒါနျးပှဲ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျ(ရုပျသံသတငျး)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစု များနှင့် စေတနာရှင်ပြည်သူများက ဆွမ်းဆန်တော်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ဆေးနှင့် ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူငွေများ လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များသို့
နပွေညျတျော၊ ပဉျြးမနားမွို့နယျရှိ ခရဈယာနျဘာသာရေးအသငျးအဖှဲ့မြားနှငျ့ အစ်စလာမျဘာသာရေး အသငျးအဖှဲ့မြားသို့ တပျမတျော(ကွညျး၊ရေ၊လေ) မိသားစုမြားနှငျ့ စတေနာရှငျပွညျသူမြားက ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲနှငျ့ အလှူငှမြေား ပေးအပျလှူဒါနျး
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၅ မည်သည့်ဘာသာတွင်မဆို လှူဒါန်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးရရှိခြင်းကိုသာ ဖော်ပြ ထားကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ များဖြစ်ပြီး ၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊
အမြိုးဘာသာသာသနာ၊ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုစရိုကျ လက်ခဏာ၊ အမြိုးသား အကြိုးစီးပှားတို့ကို မပြောကျပကျြအောငျ ထိနျးသိမျး ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရနျ နိုငျငံသားတိုငျးတှငျတာဝနျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှ – ပစိဖိတျဒသေဆိုငျရာဌာနအကွီးအကဲ H.E. Mr. Raphael Nageli အား လကျခံတှဆေုံ့(ရုပျသံသတငျး)
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံတှငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ Victory Day of Great Patriotic War (၇၅) နှဈမွောကျ အထိမျးအမှတျစဈရေးပွ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျရနျထှကျခှာ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr. Sun Guoxiang အား လကျခံတှဆေုံ့